Ronaldinho Shaaciyay Midka Fiican Messi Iyo Ronaldo %
Halyeeygii hore ee qaranka Brazil iyo kooxo badan oo Yurub ah, laakiin ay ugu wayn tahay Barcelona wiilka lagu magacaabo Ronaldinho ayaa wuxuu daboolka ka qaaday inuu diyaar uyahay in uusan macalin koox kubada cagta uusan noqanin.
Xidigaan oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubada cagta horaantii sanadkaan ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay inuu diyaar yahay inuu noqdo Muusikiiste, islamarkaana uu furan doono xarun lagu barto iyo goob lagu ciyaaro.
“Aniga ma rabo inaan noqdo macalin, qof walba waa uu ogyahay waxa aan xiiseeyo waa Muustigada, maxaa yeelay waan jeclahay waxaan rabaa inaan Jamaacad aan uga soo baxo, kadibna aan furto xarun lagu barto laguna dheelo,” ayuu usheegay FFT.
“Hada waxaa jirta koox aan asxaab nahay kuwaasoo maalin walba iigu yimaada xaafada waxayna ii sheegaa inaan hada haysto fursad aan ku hirgelin karo waxa aan jeclahay waxaana doonayaa inaan sidaas aan sameeyo,” ayuu sii daba dhigay.
Isagoo wax laga weydiiyay dooda kubada cagta wali ka taagan ee ah midka wanaagsan Lionel Messi iyo Ronaldo ayaa wuxuu ku sharaxay Ronaldinho in labaduba ay yihiin laacibiin wanaagsan, laakiin uu isaga codkiisa ku biirin lahaa Leo.
“Ronaldo waa ciyaaryahan aan caadi ahayn, laakiin aniga waxaan diyaar u ahay inaan codkayga aan ku biirayo Messi, maxaa yeelay waa mid aan garoon isla soo galnay oo aan wax badan isla soo qaadanay,” ayuu sii daba dhigay.
“Labadooduba waxay hada yihiin kuwa isku diyaarinaya koobka aduunka, waxaana urajeynayaa inay soo bandhigaan oo ay usameeyaan xulalkooda wax wanagsan, laakiin aniga waxaan rabaa inuu qaado xulkayga Brazil.
“Brazil, sanadkaan waa ay ka duwan tahay sidii hore, maxaa yeelay waxaa ku jira kooxda ciyaaryahano cusub, kuwaasoo tayo leh, inkastoo ay jiraan xulal kale, oo loo saadaalinayo, hadana waan arki doonaa midka ku guuleysan kara,” ayuu hadalkiisa kusii xiray.